Deegaan Soomaaliyeed Oo Laga Mamnuucay Xidhashada Niqaabka Haweenka Iyo Ciyaaraha Wakhtiga Aroosyada - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Deegaan Soomaaliyeed Oo Laga Mamnuucay Xidhashada Niqaabka Haweenka Iyo Ciyaaraha Wakhtiga Aroosyada
Deegaan ka tirsan waddanka Soomaaliya ee aynu jaarka nahay ayaa gabi ahaanba laga mamnuucay Xidhashada Indho-shareerka Haweenka (Niqaabka) iyo gabi ahaanba ciyaaraha ay dhallinyaradu isku arkaan xafladaah aroosyada kadib markii maamulka deegaankaasi go’aamo ka soo saaray arrimahaasi.
Guddoomiyaha degmada Baraawe ee gobolka Shabeelaha Hoose ee dalka Soomaaliya Aadan Cumar Madoobe iyo masuuliyiinta amniga ee degmadaasi ayaa amarro dul-dhigay shacabka halkaas ku nool.
Aadan Cumar Madoobe ayaa sheegay in degmada ay ka mamnuuceen Xidhashada Indha-shareerka ama niqaabka ay haweenku qaataan sababo la xidhiidha dhinaca amaanka awgood, isagoo xusay in dhowaan degmada lagu qabtay rag xidhnaa indha sharer (Niqaab) oo damacsanaa iney geystaan falal amni darro.
Sidoo kale, dumarka ayuu sheegay in laga joojiyay xidhashada dharka aan asturneyn, wuxuuna xusay in dumarka looga baahan yahay inay xidhaan Jalbaab iyo dharka kale ee adag, balse aan la ogolayn in ay haweenku qaataan Niqaabka.
Degmada Baraawe oo ka mid ah deegaamada ay mar walba ku dagaalamaan xarakada Alshabaab iyo Ciidamada Xukuumadda Maamulka Muqdisho ayaa Guddoomiyaha Degmadaasi waxa uu sidoo kale sheegay in laga mamnuucay Ciyaaraha aroosyada ee sida wadajirka ah ay uga qeyb qaataan gabdhaha iyo Wiilashu taasoo uu sheegay Guddoomiyuhu inay khilaafsan tahay shareecada Islaamka. Imika wixii ka dambeeyana aanay ogolayn ciyaar aroos nooc kasta oo ay tahay.
Shacabka degmada Baraawe ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay amaradan, iyadoo qaarkood ay soo dhoweeyeen, qaar kalena ay dhaliileen.